घाइते भएपछि टिमबाट बाहिरिए शिखर धवन, अब को आउँला ओपनिङ्गमा? | Nagarik News - Nepal Republic Media
घाइते भएपछि टिमबाट बाहिरिए शिखर धवन, अब को आउँला ओपनिङ्गमा?
नयाँदिल्ली– इंग्ल्याण्डमा जारी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध शतकीय पारी खेलेका भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन टिमबाट बाहिरिएका छन्। शनिबार अष्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा ११७ रन बनाएका धवन हातको औला फ्याक्चर भएर घाइते भएपछि तीन हप्ताका लागि टिमबाट बाहिरिएका हुन्। अब उनले न्युजिल्याण्ड (१३ जुन) र पाकिस्तान (१६ जुन) विरुद्धको खेल खेल्न पाउने छैनन्।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७६ १६:५३ मंगलबार
एकदिवसीय_विश्वकप भारत शिखर_धवन घाइते